Indlu encinane emahlathini athuleyo
Hutisko-Solanec, Zlínský kraj, Czechia
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJan
Indlu eneminyaka eyi-110 ubudala kunye nendlwana entsha enzulu kwiinduli ezinokubamba amaqela amakhulu okanye iintsapho ezininzi. Inochuku oluya kukushiya uzibuza ukuba ukwintsomi.
Iindlwana ezimbini ezintle ezikwindawo ezolileyo ezinokuhlala abantu abayi-14. Yiza kwaye uhlale ukonwabela iimbono ezintle zomhlaba ozolileyo, ngelixa usekude nokufikelela kwimpucuko. Yonwabela iimbono ezintle ukusuka kumacala amaninzi ngelixa kwipropathi ubukele ilanga litshona kwaye uhleli kumlilo oshushu njengoko umoya uphola ngokuhlwa. Yiba namava okuhamba ngeendlela ezininzi, iintyatyambo kunye nezilwanyana emva koko uphumle kwi-sauna efudumeleyo! Indalo ejikelezileyo intle ngokumangalisayo. Izindlu zangasese zibonisa i-architecture ye-Wallachian eqhelekileyo. Zezesintu ngokwesitayile kodwa zihlaziywa ngaphakathi ngezinto zangoku ezifana nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini weNesspresso, ibhafu yonyawo lwe-claw, uqhagamshelo lwe-wi-fi ekhawulezayo kulo lonke kwaye inabela kwindawo engaphandle ekufutshane. Olu luhambo olulodwa lwabantu abafuna ukuphumla kwaye babe namava amnandi ngokwenene kude nengxolo yobomi esixekweni.
Kukho izindlu ezi-2, ikhitshi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, kunye neyadi enkulu eyenziwe ngezandla ye-2/3 yeehektare ezijikeleze amakhaya. I-cottage nganye inamagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezininzi ezingatshatanga ecaleni kweendonga kwisitayile semveli.
Unokukhwela ibhasi ukuya eProstřední Bečva kwaye ukusuka apho uhambe malunga nemizuzu engama-30. Xa uhamba ngemoto ungapaka ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-2 kweyona ndlu ikufutshane nasebumelwaneni kwaye ukusuka apho uhambe unyuka i-15 imizuzu ehlathini.
- eKrakow, ePoland; 2.5 iiyure zokuhamba
- ePrague; Iiyure ezi-5 zokuqhuba
- Ostrava (Mosnov); 1 iyure yokuqhuba
Umgama wokuqhuba kunye nokuhamba ngebhayisekile zininzi izinto ezinomtsalane, njengedolophu yamaplanga yaseRožnov pod Radhoštěm.
Ukuhamba ngeenyawo ukuya e-Radhost (umzuzu we-20 ukuya entloko) unokubona umfanekiso odumileyo weRadegast, kunye nemibono yeekhilomitha ukuya e-Ostrava.
Ukuqubha kunokwenzeka kwidama elikufutshane eHorni Becva.
Andifane ndibekho. Uza kuba wedwa ixesha elininzi. Umcoci wam uzakuba khona ukuze amkele iindwendwe kwaye azibonise malunga nezindlu zangasese kunye nokujonga iindwendwe. Iindwendwe azinakuhamba de kufike umphathi.
Iilwimi: Čeština, English, Sign Language